Magaalaa Dassee masjiida Shawaabar irra balaa ga'een namoonni 11 miidhaman - BBC News Afaan Oromoo
Halkan edaa Magaalaa Dassee masjiida Shawaabar keessatti darasoota Qur'aana qara'aa turanirratti haleellaa raawwateen namoonni 11 miidhaman.
Namni tokko jireenyasaaf kan sodaachisu ta'uu baatullee baay'ee miidhamuu kan dubbatan Meedikaal Daayirektariin Hospitaala Riiferaalaa Dassee Doktar Mangistuu Worquu, kanneen biroorra garuu miidhaa salphaan ga'uu BBCtti himaniiru.
Dubartiin ulfaa Dambi Doollootti rasaasaan ajjeefamte
Namoonni sadi mataarra rukutamuu fi miidhaan qaamaa biroon irra ga'eera kan jedhan Doktar Mangistuun, miidhaan irra ga'e kan lubbuuf sodaachisu waan hin turreef yaalii yeroof argataniin wayyaa'anii amma wal'aansa dabalataaf gara Hospitaalaa dhufani jedhu.
Jiraataa Magaalaa Dassee kan ta'an Haji Sa'id Indiriis isaaniifi darasoonni utuu masjiidatti barnoota qur'aanaarra jiranii haleellaan akka irra ga'e BBC'tti himaniiru.
Ka'umsa balaa kanaa
Waggoota torban darbaniif sababii waldhabdee haala qaraatii qur'aanaarra tureen magaalaa keessaa moggaatti ba'anii akka turanillee himaniiru Haji Sa'iid.
Amma garuu haala mijataa uumameefitti fayyadamuun magaalaatti deebi'anii wayita qaraatii eegalan Masjiida Shawaabarrii keessatti haleellaan mudateera jedhan.
Masjiidni guddichi Anwaar balaa ibiddaa irraa hafe
Rakkoo mudate tasgabbiidhaan ilaallee marii fi marabbaadhaan furachuu qabnas jedhaniiru.
Dhimmoota walitti bu'iinsa uumuu danda'an kamiyyuu mariidhaan furuuf koree dhimma kanarratti hojjetu filachuullee dubbataniiru.
Haala kanaan kamisa hojii barsiisuu akka eegalan kan dubbatan Haji Sa'iid wayita isaan Afaan Arabaatiin barsiisan miiltoonsaanii kan biraan Sheek Mahammad Nuur ammoo hiikaa muslimoota naannoo Shawaabar barsiisaa turan.
Haala kanaan Sanbatallee barsiisuu itti fufanii utuma jiranii gaafa Dilbataa bulchiinsi masjiidichaa barsiisuun akka hin danda'amne beeksisa baase jedhu Haji Sa'iid.
Koreewwan filatamanii turanis warra bulchiinsaarraa homaa akka hin barbaanne garuu barnoonni quraanaa akka itti fufu cimsanii ibsaniiruuf jedhan.
Wiixata kaleessaa haala waldhabdee mudaterratti qaamolee nageenyaa waliin hanga salaata Zuhriitti erga mar'atanii booda walii galteerra akka ga'anis ibsaniiru Haji Sa'id.
Balaa abiddaa mana sirreessaa Dabra Maarqoos
Sababa kanaan hojiin barsiisuu galgala akkuma kanaan duraatiin wayita itti fufu namoonni Kombolchaa fi iddoowwan biroorraa dhufan jeequu eegalan jedhu Haji Sa'id.
Wayita jeequmsi ka'e sanatti Rabbiin sodaadhaa jedhanii kadhachaa akka turanillee dubbataniiru.
Haalli wayita tasgabbaa'us barumsi itti fufe jedhu Haji Sa'id, ta'us garuu darasoota keessa tokko ka'ee haa dhaabbatu haa dhaabbatu jedhee iyye, isa booda nageenyaaf sodaa qabanirraa kan ka'e barattoota shan filatanii naannoo akka to'atan ramaduusaanii, xiqquma osoo hin turin haleellaan eegalamuu dubbataniiru.
Battaluma mancaa tokko, qottoo sadii fi dhagaa hedduu masjiida keessatti arguusaanii Haji Sa'id dubbataniiru.
Yeroodhaaf namoonni 42 masjiida keessaa, kuun immoo alaa walumaa galatti namoonni 55 poolisiidhaan to'atamuu nuuf ibsaniiru Haji Sa'id.
Dabra Maarqoos: Mana sirreessaa keessatti abiddi ka'e
Pirezidaantiin Aljeeriyaa aangoo akka gadhiisaniif gaafataman
Israa'el Gaazaa haleelaa jirti
Peentaagon dallaa daangaa Meeksikoof $ biiliyoona 1 ajaje